🥇 ▷ Xiaomi waxaa ka mid ah bedelka dhamaadka xayeysiinta MIUI ✅
Xiaomi waxaa ka mid ah bedelka dhamaadka xayeysiinta MIUI
Qof kasta oo ka qaatay dan yar adduunka adduunka casriga ah Ogow in soo-saare kasta inta badan uu leeyahay lakab u gaar ah oo gaar u ah. Android waxaa lagu muujiyey aasaaska wax aan muuqan oo dhan oo lagu beddelay howlo dheeri ah. Arrinta Xiaomi, MIUI Waxaa loo soo bandhigayaa inay tahay waji kala duwanaanta siisa hawadaas midda kala-geddisan. Haa, lakabyada hagaajinta ma aha kuwo kaamil ah iyo, marar badan, waxay leeyihiin dhinacyo aan kaliya ku qancin isticmaaleyaasha.
Arinta MIUI, waxaan ku helnaa xad dhaaf codsiyada gaarka ah Ku dhawaad ​​waligood aakhirka ma isticmaalaan. Xaaladdan oo kale, waxaan ka wada hadli doonnaa wax kasta oo la xiriira xayeysiinta. In kasta oo inta badan ay jiraan waxyaabo intaa ka sii badan oo ku jira noocyada Shiinaha, haddana taleefannada Xiaomi sida caadiga ah waxaa ka mid ah kuwa aan caadi ahayn Soo-jeedin xayeysiin ah oo ku xeeran codsiyada shirkadda. Tani waa mid ka mid ah dhinacyada inta badan cabashooyinka sababay adeegsadayaasha, sidaa daraadeed Xiaomi waxay ballan qaaday inay midayn doonto a u rog si aad u joojiso ogeysiisyadan. Oo isna wuu oofiyaa.
Ku salaam macan xayeysiisyada MIUI
Tani waxay noqon lahayd bedelka lagu joojinayo xayeysiinta
Isku-darka xayeysiinta ee lakabyada shaqsiyadeed badanaa waa mid ka mid ah go’aamada waxyeellada u leh sumadda. Xiaomi way ogtahay in go’aamada noocan ahi ay saamaynayaan adeegsadeyaasheeda, waana sababtaas sababta ay u go’aansatay dhexgeli beddel cusub oo xayeysiisyadan looga hortegi karo. Sidan, qof kasta oo aan dooneynin in lagu silciyo ogeysiisyadan wuxuu kaliya ku qasban yahay inuu dhaqaajiyo badhanka cusub ee dhowaan imaan doona qaab xasilloon.
Waqtigan xaadirkaan, howlahan cusub ayaa kaliya laga heli karaa beta-ka MIUI ee ugu dambeeyay, nidaam ku saleysan isugeynta isku xirka xayeysiinta ee isticmaaleyaashu sidaas codsadeen. Ugu yaraan tan waxaa xaqiijiyey IT Home oo leh shaashad shaashad kaas oo goobtan lagu muujiyey. Dabcan, waa in la ogaadaa in badhankan uu kuxiranyahay khalkhal, sidaa daraadeed dhamaan mobilada waa lala socon doonaa Xayeysiinta Nooca Caadiga ah.
Xiaomi waxay go aansatay inay siiso bakeeriga adeegsigeeda Arimaha xayeysiinta Hadda laga bilaabo, qof walba wuxuu noqon doonaa midka go’aansaday haddii ay rabaan inay arkaan xayeysiimaha sumadda Shiinaha ama haddii aysan dooneynin rabshooyin badan oo wax ka beddela nabada maskaxda. Waxa cad waa in wax walba ay noqdeen go’aan, oo aan ahayn wax lagu soo rogay.
Xigasho | Hoyga IT